Home » Events » Announcement » မူလတန်း မှ အလယ်တန်းအထိ guide လုပ်ပေးမည်။
Address: YANGON မြို. တာမွေမြို.နယ် မေတ္တာညွန်.ရပ်ကွက် Wanatheingi street NO.516
Contact Number: 0943066623
Listed: April 26, 2014 9:55 pm
ငယ်စဉ်အခါပညာရှာဆိုသလို ပညာဟာဘ၀တစ်သက်တာအတွက်အလွန်.ကို အရေးကြီးတဲ. အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ခေတ်ကြီးမှာကလေးတွေဟာ ပညာကို တော်ရုံတန်ရုံ့တတ်ရုံ့နဲ.တော.လူသူကြားထဲမ ကျော်ကြားနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ ကလေးတွေအတွက် ပညာကို အခြေအမြစ်ကျကျသင်ကြားပေးလိုပြီး နိုင်ငံကို ပညာထူးချွန်တဲ. နိုင်ငံ.သားကောင်းတွေနဲ.ဂုဏ်ဖော်ချင်တာပါ။ ကလေးတွေအတွက် ပညာရေးကို မပူပန်ချင်ရင်တော. ကျွန်တော် မောင်ကောင်းဂုဏ်ထင် ကို သာဆက်သွယ်လိုက်ပါခင်ဗျာ….။
Ad Reference ID: 315535bca305432d
class service taining tuition အခြေခံကောင်းစေရမည် ။